गुल्मीमा एकल महिलाद्धारा शिशु जन्माएर हत्या – Gulmiews
गुल्मीमा एकल महिलाद्धारा शिशु जन्माएर हत्या
२३ भाद्र २०७२, बुधबार १६:१२ Sanju Kauchha
गुल्मी, भदौ २३ । गुल्मीकी एउटी एकल महिलाले अवैध गर्भ धारण गरेर नव जात शिशुको घाँटी निमोठेर हत्या गरेको खुलासा भएको छ । पराल्मी गाविस वडा नम्वर ५ टापु भन्ने गाउँकी ४२ वर्षिया एकल महिला कमला दर्जीले भदौं १३ गते घर पछाडी शिशु जन्माएर हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले आज खुलासा गरेको हो ।
प्रहरी निरीक्षक रामप्रसाद पौड्यालका अनुसार ति एकल महिला लुम्विनी मेडिकल कलेज प्रभास पाल्पामा विरामी भई भर्ना भएको र हिजो डिस्चार्ज हुन साथ उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । उनका श्रीमानको १२ वर्ष पहिले नै मृत्यु भएको थियो । उनका तिन छोराहरु मध्ये २ छोराहरु विदेशमा छन् भने १३ वर्षिय कान्छा छोरा घर मै रहेका छन् । एक छोरीको विवाह भई सकेको छ ।
प्रहरी निरीक्षक पौड्यालका अनुसार उनलाई गर्भ धारण गराउने पुरुष को हो ? भन्ने कुरा खुल्न सकेको छैन । खोजी कार्य जारी रहेको पौड्यालले बताए ।
Comments comments	मिल्दाजुल्दा शिर्षकहरु:	यौन धन्दा गरिरहेका ११ जोडी प्रहरी द्धारा पक्राउ...	२ कार्तिक २०७३, मंगलवार १९:४५	कोदालोले हानेर बृद्ध आमाको हत्या गर्ने छोरा पक्राउ...	७ आश्विन २०७३, शुक्रबार १४:२९	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	दलित समुदायबाट सिडियो बनेका बिश्वकर्मा अमेरिकामा सम्मानित